Job 8 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Okwu mbụ Bildad kwuru (1-22)
Ọ sịrị na ọ ga-abụ na ụmụ Job mehiere (4)
‘Ọ bụrụ na ị na-eme ezi omume, Chineke ga-echebe gị’ (6)
Ọ sịrị na ọ ga-abụ na Job anaghị asọpụrụ Chineke (13)
8 Bildad+ onye Shua+ wee sị: 2 “Olee mgbe ị ga-akwụsị ikwu okwu otú a?+ Okwu si gị n’ọnụ apụta bụ naanị oké ifufe. 3 Chineke ọ̀ ga-ekpe ikpe na-ezighị ezi,Ka Onye Pụrụ Ime Ihe Niile ọ̀ ga-eme ihe na-adịghị mma? 4 Ọ bụrụ na ụmụ gị mehiere ya,Ọ hapụrụ ha ka a taa ha ahụhụ maka nnupụisi ha. 5 Ma ọ bụrụ na ị tụkwasị Chineke obi,+Rịọkwa Onye Pụrụ Ime Ihe Niile ka o meere gị amara, 6 Ọ bụrụkwa eziokwu na ị na-eme ezi omume ma na-akwụwa aka ọtọ,+Ọ ga-elebara gị anyaMa mee ka ihe dịrị gị ná mma otú ọ dịbuuru gị. 7 N’agbanyeghị na e nweghị ezigbo ihe i nwere ná mmalite,Ị ga-emecha baa ọgaranya.+ 8 Biko, jụọ ọgbọ gara aga ajụjụ,Chebakwara ihe ndị nna nna ha chọpụtara echiche.+ 9 N’ihi na ọ ka bụ ụnyaahụ ka a mụrụ anyị, e nweghịkwa ihe anyị ma,N’ihi na anyị anaghị adịte ndụ aka.* 10 Ọ̀ bụ na ha agaghị akụziri gị ihe,Kọọkwara gị ihe ha ma? 11 Ahịhịa papaịrọs ọ̀ ga-eto ogologo n’ebe mmiri na-anaghị adọ? Ahịhịa amị ọ̀ ga-eto ogologo ma ọ bụrụ na mmiri adịghị? 12 Ọ ga-ebu ahịhịa ọ bụla ụzọ kpọọ nkụMgbe ọ na-amabeghị ifuru, mgbe a na-akajipụbeghị ya. 13 Ọ bụ ihe a ga-eme ndị niile na-echefu Chineke,N’ihi na ihe onye na-anaghị asọpụrụ Chineke* na-ele anya ya agaghị enwe isi, 14 Bụ́ onye chekwubere ihe na-enweghị isi,Onye tụkwasịkwara obi n’ihe na-esighị ike ka ọnyà* ududo. 15 Ọ ga-adabere n’ụlọ ya, ma ụlọ ya ga-adakasị. Ọ ga-agbalị ka o jide ụlọ ya aka, ma ọ gaghịzi adị. 16 O yiri obere osisi a na-agba mmiri nke anwụ na-achasa,Alaka ya gbasasịkwara n’ubi.+ 17 Ọ gbanyesiri mgbọrọgwụ ike n’ikpo nkume. Ọ na-eji ebe nkume juru emere ụlọ ya. 18 Ma mgbe a ga-efopụ ya n’ebe ọ dị,Ebe ahụ ga-agọnahụ ya, sị, ‘Ahụtụbeghị m gị.’+ 19 N’eziokwu, ọ bụ otú a ka ọ ga-esi funyụọ anya.+ Osisi ndị ọzọ ga-esizi n’ájá pulite nọchie ya. 20 O doro anya na Chineke agaghị ajụ ndị na-enweghị ihe a ga-eji taa ha ụta,*Ọ gaghịkwa akwado ndị ọjọọ,* 21 N’ihi na ọ ka ga-eme ka ọchị ju gị n’ọnụ,Meekwa ka ọnụ gị na-eti naanị mkpu ọṅụ. 22 A ga-eyiwe ndị kpọrọ gị asị ihere ka uwe. Ụlọikwuu ndị ajọ omume agaghịzi adị.”
^ Na Hibru, “ụbọchị anyị n’ụwa bụ onyinyo.”
^ Ma ọ bụ “onye kwụsịrị ife Chineke fewe chi ọzọ.”
^ Ma ọ bụ “ndị kwụsiri ike n’ebe ọ nọ.”
^ Na Hibru, “ejide ndị ọjọọ aka.”